यस्ता छन् मृगौला रोग लाग्नुको मुख्य कारण जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
क्रोनिक मृगौला रोग हुने सबैभन्दा मुख्य कारण मधुमेह हो । मधुमेहले मृगौलाको कार्यलाई बिस्तारै कम गरिदिन्छ । सुगरको उच्च मात्राले मृगौलाको रक्तवाहिनी नलीलाई असर पुर्याउछ र क्रोनिक मृगौला रोगको कारण बन्छ ।
क्रोनिक मृगौलाको समस्या हुने एउटा कारण उच्च रक्तचाप पनि हो, जसलाई हाइपरटेन्सन पनि भनिन्छ । उच्च रक्तचापले मृगौलाको कार्यलाई असर पार्छ । मृगौलाको समस्या अन्य कारणले देखिएपनि हाइपरटेन्सनले यसलाई अझ बढी खराब पार्छ ।
मृगौलाको धमनीले यसको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । साथै यसले मृगौलामा रगत प्रवाहमा पनि सहयोग पुर्याउछ, यदि यो धमनी अवरुद्ध भएमा रगत प्रवाह हुन सक्दैन र समस्या बढ्छ ।
जन्मजात समस्याले मुत्रमार्गमा बाधा उत्पन्न गराउँछ, यसबाट कैयौं समस्या उत्पन्न हुनसक्छन्, जसले मृगौलालाई असर पार्छ । यद्यपि गर्भमै रहेका बेला यो समस्या फेला पारेमा शल्यचिकित्साद्वारा ठीक गर्न सकिन्छ ।
लागुऔषध तथा लामोसमयसम्म औषधि सेवनले मृगौलालाई असर पुग्न सक्छ । आवश्यकभन्दा बढी स्टेराइडल एन्टी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्सको प्रयोग र स्ट्रीट ड्रग्सको प्रयोगले किड्नीलाई बढी असर पुर्याउछ ।
दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्ती जसले मृगौलालाई हानी पुर्‍याउँछ
१. पोषणको अभाव
२. मासु बढी खाने
४. चिया कफी बढी सेवन
५. पेनकिलर सेवन
६. जाँड रक्सी
७. पानी कम पिउने
८. नून बढी
९. पिसाव रोक्ने
१०. गुलियो खाने बानी
मानव शरिरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मध्ये मिर्गौला एक हो । मिर्गौला रोगका कारण नेपालमा वर्षौनी धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । विकासशील राष्ट्रहरुमा जनचेतनाको कमीका कारण धेरै मानिसहरुको ज्यान गरेको तत्थ्याङक देखिन्छ ।जीवनशैली मा सामान्य सुधार गर्दापनि यो खतरनाक रोगबाट बच्न सक्छौं ।
शुरु मै यसको असर देखिदैन । जब देखिन्छ तब निकै भयानक भइसकेको हुन्छ । यो रोगले मानिसलाई विस्तारै विस्तारै आक्रमण गर्ने भएको हुनाले यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । त्यसकारण यस रोगको बारेमा पुर्वसावधानी अपनाउन एकदमै आवश्यक छ ।
यो रोगको लक्षणहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१ मिर्गौलामा भएको समस्याले गर्दा शरीरको टक्सीस बाहिर आउन पाउँदैन । त्यसले हाम्रो छालामा समेत असर ल्याउन सक्छ ।
२ मिर्गौलामा समस्या भएपछि रगतमा यूरियाको लेवल बढ्ने हुनाले त्यसले मुख गनाउने समस्या देखिन्छ ।
३ मिर्गौलामामा समस्या आएपछि रगतमा पानी र नुनको मात्रा बढ्ने गर्छ । जसले ब्लड प्रेशर बढ्ने गर्छ ।
४ शरीरको बिकास बस्तु बाहिर निस्कन नपाएपछि हमेसा टाउको दुखिरहेने, उल्टी आउने हुन्छ ।
५ मिर्गौला खराब हुनु लाग्दा बाराम्बार पिसाव आइरहन्छ । रातको समयमा झनै बढि हुने गर्छ ।
६ पिसाप गर्ने बेला निकै पीडा हुने गर्छ । दुखाईका कारण पिसाव नहुने पनि हुनसक्छ ।
७ पिसावबाट रगत वा साबुनको फिँज जस्तो आयो भने तुरुन्त चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य विषेशज्ञहरुले बताएका छन् ।
८ मिर्गौलामाबाट हाम्रो शरिरलाई नचाहिने अनावश्यक विकारहरु बाहिर जान पाउँदैन । त्यसपछि ट्यूमरको रुप लिने गर्दछ । मिर्गौलाको भागमा दुख्ने र सुन्निने वा पेट फुल्ने समस्या हुन्छ ।
९ किड्नीको खराबीले गर्दा व्लडमा अक्सीजन प्रवाह हुन पाउँदैन । त्यसले गर्दा शरीर थकान र कमजोरी महसुस हुने गर्दछ ।
यो मिर्गौलाको विरामीको आम लक्षण हो । शरीरको सम्पूर्ण जोर्नीहरु दुख्छ ।
कसरी जोगाउने मृगौला ?
मानव शरीरको कम्मरको दुवैतिर सिमी आकारका मृगौलाहरू हुन्छन् । वयस्कमा कम्प्युटरको माउस साइजको हुने मृगौलाको तौल १ सय ५० ग्राम जति हुन्छ । दायाँतर्फको मृगौला थोरै तलतिर हुन्छ । २४ घण्टामा मृगौलाले करिब १ सय ८० लिटर रगत (तरल पदार्थ) फिल्टर गर्छ । त्यसमध्ये रगतमा रहेको विकार वस्तु (हानिकारक र रासायनिक पदार्थ) फिल्टर गरेर १७८.५ लिटर तरल फेरि शरीरमा फर्काउँछ । यस प्रक्रियामा स्वस्थ मानिसको शरीरमा दैनिक करिब डेढ लिटर पिसाब निर्माण हुन्छ । पिसाब थैलीले टयांकीको रूपमा शरीरबाट बाहिर फयाँक्नुअघि भण्डारणको रूपमा पिसाब थैलीमा दुई कप बराबर पिसाब २ देखि ५ घण्टासम्म थेग्न सक्छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु मात्रै मृगौलाको पत्थरीको कारणचाहिँ होइन । यसबाहेक पिसाब नली थुनिनु वा अन्य केही संक्रमण हुनु, हप्तौंसम्म पनि एकै ठाउँमा बसिरहनु, खानामा क्याल्सियम, अक्जालेट, युरिक एसिड, भिटामिन ‘डी’ को मात्रामा बढी हुनु, केही औषधिको गलत प्रयोग र अन्य विभिन्न रोगका कारणले पनि पत्थरीको समस्या हुन सक्छ ।
अमिलो रसयुक्त फल वा पेयले पत्थरीको समस्या घटाए पनि भिटामिन सी चक्कीको रूपमा बढी लिँदा पत्थरी हुन सक्छ । यी विभिन्न कारण भए पनि पर्याप्त पानी पिउने र स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाउने गर्नाले मृगौलाको रोग लाग्ने जोखिम कम हुन्छ ।
पिसाब सम्बन्धी आम समस्या निम्न किसिमका हुन्छन्
Up Next भगवान कृष्णले पाण्डवकै पक्ष किन लिए ? किन युद्दमा कृष्णले हतियार उठाएनन् ?